TRACK SESSION subtitles September 24, 2020
Muvhuro wanhasi Gunyana 7, zvinoreva kuti mwaka wekuvhima elk watanga. Isu tave kuda kuenda pakapfupika jog, kungodziya pamberi pekusimbisa kudzidziswa. Ndinovimba hatigumbure vavhimi. Ivo vanofanirwa kuitirwa zvezuva racho. Nyasha! Pano Isu takapfupika kuti tidzivise ruzhowa Ikoko 1 awa kudziya kwapedzwa, kunotevera kumusoro kune kumwe kusimba uye kurovedza muviri. Iye zvino tava kuenda kugaraji, ini ndatove ndapedza iwo akasimba. Kudzidziswa kwesimba chete kwakasara! Iwe unodana izvo kudziya? Nhasi ndiri kuita skate nguva Pamugwagwa. Ini ndakanga ndatanga kuronga kuenda ku "Ove berget" Asi hazvigone pasina kukwira. Uye Chitatu chanhasi, zvinoreva kuti Emily akasiya Umea pakutanga. Izvo zvinoita kuti zviome kunamatira kuchirongwa ichocho. Asi iyo track inofanira kuita zvakanaka chete. Saka ndichaita izvozvo nhasi. Ini ndichagara kwezuva rimwe chete ndisati ndananga kuUmeå. Heino howa, iyo iri kuoma zvakanaka. Zvakakwana Mamiriro ekunze akanaka futi! Ikoko tinoenda, tapedza nesangano iro. Ini ndainzwa kunge ndakaomarara nhasi, asi .. Yakanga isina kunyanyoipa. Izvi zvichaitika panguva ino yegore, kana muviri wako uri pasi pemutoro unorema. Chimiro chinosiyana. Chinhu chakakosha ndechekuti urambe wakanangisa pane iro basa riripo wobva waenderera mberi. Zvikuru! Gara uchikoshesa kuitwa pamwe nechikamu chakaomarara chenguva. Iye zvino ndiri kuenda kunodzikisira pasi kwechinguva uye gare gare masikati ini ndichave neyakareruka yekupora chikamu. Ini ndichaenda kunokwira bhasikoro. Tiri muUmea. Ini pamwe ndinofanira kukiya mota, ikozvino zvatiri muguta. China Ndiri kuronga kugara kweinopfuura vhiki Tarisa izvi kunze Taco nguva Yummy! ndine nzara Hauna kumira munzira yako kuno? Hongu ndakadaro. Ini ndaive nembwa inopisa uye mamwe maice cream muStugun. MuStugun? Uye kofi zvakare. ndazviwona (inaudible) Zvirinani kuti taenda munzira kwayo Asi zvake hazvishande. kwete Damn. Iyi imhosva yako. Ngatitendeukei. Mira, batisisa paminiti, ndinofunga tinogona kuzviita. Ndinoziva nzira, iwe wakangondinyengedza kune imwe nzira Tarisa uone apa Takananga ikoko, Biltema muErsboda Ndeipi iri pamusoro apa. Uye tiri zasi kuno. Yup. Tinofanira kutora kodzero, sekufunga kwedu. Aya ndiwo marongero azvinoita ... Kana tikadzokera kumashure zvishoma ndokutora kuruboshwe kumusoro mumugwagwa padivi pedu, tinogona kumutevera iye. Hongu, asi isu tinogona kuita nzira pfupi kuburikidza neyadhi. Kuburikidza neruzhowa Takazviita here? Ehe, takazozviita. Mamiriro ekunze akanaka! Ini ndinongova nemubvunzo mumwe chete kwauri. Muti wepaini wakakwanisa sei kukura ipapo!? Nditsanangurire izvozvo. Kunze kwenzvimbo dzese dzekukura, uyu mudiki mupaini muti wakasarudza kugara ipapo, pamusoro pebwe guru. Hapana chimwe chinhu padombo iri Kune kumwe kukura kwemoss. Kwete Iyo pine yakangofanana newe, yakasindimara diki bastard. Ndingati hazvina basa Ehe, haisi iyo chaiyo nzvimbo yekugara Hameno kuti muti waifungei pawakasarudza kugara ikoko. Icho chinopenga! Inonakidza kwazvo Mangwanani akanaka! Ndiwo Mugovera uye yave nguva yemimwe nguva yekumhanya. Asi zvisati zvaitika ndichaedza kupindura mimwe mibvunzo yako. Ndakafunga kuve neQnA pane yangu Instagram Nyaya Saka ndakafunga kuti ndichapindura vamwe vavo mukati mevamwe vlog. Ndine mibvunzo yakawanda yakafanana, nezve izvo zvandinofarira basa uye ndezvipi zvenguva zvandinofarira. Ini ndaiti kumhanya ndiko kwandinofarira rudzi rwebasa kunze. Zvese kana zvasvika kure-kure-kure kudzidziswa uye zvikamu. Iyo chaiyo mhando yekumhanya haina basa zvakanyanya. Izvo chete zvine chekuita nenyaya yekuti chiitiko chinoshanduka. Kuona sezvese zvaunoda ibhutsu. Iwe unogona kumhanya chero kupi futi, kungave kuri musango, munzira kana pane asphalt. Izvo hazviite iwo mutsauko wakakura kudaro. Saka kupindura mubvunzo wako. Kumhanya ndiyo yakanakisa fomu yenguva mumaonero angu. Zvirinani muzhizha. Uye kumhanya zvakajairika ndiyo nzira yangu yekuda kurovedza muviri. Maitiro angu akakodzera ekurovedza muviri, angave akanaka kwenguva refu kumhanya mumakomo. Nguva yekuwana dzimwe nguva dzinoitwa panzira! Waita zvakanaka vakomana! Takatanga ne4x1000m pachikumbaridzo chinhanho. Mheto yekutanga yaive 3:17 Uye vamwe vatatu vaive vangangoita 3: 13-3: 14. Iine maminetsi maviri ekuzorora pakati. Mushure meizvozvo takaita 10x200m Nemasekondi makumi matatu ekuzorora Ivo vakatitora takatenderedza 32 masekondi. Uyezve 4x1000m zvakare. Nguva dzepamakumbo dzaive 3:10 ... 3:07, 3:06 na2: 58 Iwo ekupedzisira anogona kunge akapfuura muganho wekumhanya. Kwete iyo 2.58 imwe kana imwe chete. Zvakaoma Ndine mubvunzo wekuti mangani zvikamu zvenguva zvandinoita vhiki rega rega. Uye mhinduro ndeye 2-3. Kazhinji ndinozviita kakawanda mukudonha. Iko mamwe mavhiki anosvika anosvika mana epakati zvikamu. Asi kazhinji ndinoita 2-3. Vazhinji venyu maive muchishamisika kuti mangani maawa ekurovedza andinowana vhiki imwe neimwe. Izvo zvinosiyana zvakanyanya. Mamwe mavhiki, pandinenge ndiine akawanda akareba zvikamu Huwandu hwemaawa hunosvika pamakumi matatu. Ipo vhiki dzandinoita kwakawanda nguva uye kukwirira kushanda kunze ... Iwe haugone kurovedza muviri zvakanyanya, nekuti muviri wako wakanyanya kuneta. Mavhiki iwayo anongonditorera maawa gumi nemashanu kusvika makumi maviri ekukosha. Vhiki rakajairwa zvisinei, angave maawa makumi maviri neshanu. Asi zvinoenderana zvakanyanya nemhando yekurovedza muviri yaunoita vhiki iyoyo uye nehuremu hwesimba. Kumhanya kwakawanda kunodurura mamhasuru ako kupfuura kuita roller skiing. Iwe haugone kuita maawa mazhinji uchimhanya sezvaungaita pane roller skis. Ini handifunge kuti iwe unofanirwa kugadzirisa pahuwandu hwemaawa ekurovedza muviri. Pfungwa dzako dzinofanirwa kunge dziri pane izvo kurovedza muviri kwako kunosanganisira. Asi kana iwe uchiziva kuti urikuita yakakwira mwero weiyo intesity, haugone kuita makumi matatu emaawa masvondo. Ichi chikamu chakanditorera ipfupi ne 1.5h Izvo zviri pachena zvinoreva kuti yaive yakaoma. Uye iwe unofanirwa kuita zvakawanda zveizvi kuti uwane maawa makumi matatu anokosha. Mhinduro ndeyekuti inosiyana zvakanyanya, zvinoenderana nemhando ipi yechiitwa yauri kuita. Ndine mazuva matanhatu ekurovedzera vhiki imwe neimwe, uye kazhinji nguva dzose zvikamu zviviri pazuva. Izvo zvinondipa gumi nezviviri zvikamu pasvondo. Ndinogara ndine zuva rekuzorora. Aive masekondi makumi matatu. Uri kuitei? Ndiri kuita motor kudzidza. Unogona kuita izvi? Eheka. Batirira. Ikoko Ndine mubvunzo kwauri. Wakashandisa sei miriyoni? Iyi haisi mhinduro yawanga uchitsvaga, asi ini handina. Ndiri kuchengetedza. Muchatitengera kudya kwemanheru manheru? Chokwadi, ndinogona kuzviita. Ini chaizvo handina kushandisa yakawanda zvachose. Tiri munzira kuenda kunotora chikafu. Emily anondirambidza kutyaira. Iwe wakashata kwazvo pazviri. Zvirinani kuti anokwanisa ari muchigaro chevatyairi. Ini handibvumidzwe kutyaira nekuti ini ndakaiisa kwayakarerekera pamharadzano dzenzira nemumigwagwa yemotokari ndokusiya mota ichiita idling kwechinguva. Ipapo anonzwa kunyara kwazvo neni! Ndosaka ndisingabvumirwe ... Kwenguva yakareba sei isu takave coulpe? Anopfuura makore mana chete. Makore mana. Uye achiri kunyara nezvangu. Mubvunzo unotevera ndewokuti; Chii chandingaite dai ndanga ndisiri kuita izvi? Uye chii chandichaita kana yangu skiing basa rapera? Hazvina kubuda. Ndine zvakawanda zvinhu zvandiri kuda kuita. Ndiri kufarira kudzidza log-kuvaka. Chinhu chekuita nekuvaka. Asi ini zvakare ndine zano rekuti ini ndoda kudzidza zvemagetsi mainjiniya. Ndinozviona zvichinakidza. Ndine mazano mazhinji. Asi tichaona zvandinopedzisira ndaita. Zvinonzwika zvakanaka! Ehe ndinoda kuramba ndichiita imwe mhando yemitambo. Ini handidi kuzvirega zvizere. Heino kudya kwemanheru. Sushi Ini ndinofanira kunge ndakaraira zvekuwedzera. Asi chero chii, izvi zvichaita. Chikafu chakawanda. Yum Izvi zvakaoma. Asi ndiri kutarisira. Tichachengeta QnA ichienda mumavhiki anotevera vlog. Saka kuti ndigone kupindura mimwe mibvunzo yako. Ndiri kupedza vlog pano. Kufanana uye kunyorera, kuti usarasikirwa nechikamu chinotevera. Tichava muSolleftea mukupera kweiyo. Takananga ikoko neChishanu ndinotenda Zvichava zvinofadza. Kutenda nekuona! Ndichakuona. Sara mushe!
<text sub="clublinks" start="18.36" dur="2.04"> Muvhuro wanhasi </text>
<text sub="clublinks" start="20.66" dur="4.92"> Gunyana 7, zvinoreva kuti mwaka wekuvhima elk watanga. </text>
<text sub="clublinks" start="25.76" dur="5.34"> Isu tave kuda kuenda pakapfupika jog, kungodziya pamberi pekusimbisa kudzidziswa. </text>
<text sub="clublinks" start="31.1" dur="4.32"> Ndinovimba hatigumbure vavhimi. </text>
<text sub="clublinks" start="35.62" dur="3.86"> Ivo vanofanirwa kuitirwa zvezuva racho. </text>
<text sub="clublinks" start="55.84" dur="1.4"> Nyasha! </text>
<text sub="clublinks" start="63.52" dur="2.68"> Isu takapfupika kuti tidzivise ruzhowa </text>
<text sub="clublinks" start="70.58" dur="1"> Ikoko </text>
<text sub="clublinks" start="72.08" dur="4.8"> 1 awa kudziya kwapedzwa, kunotevera kumusoro kune kumwe kusimba uye kurovedza muviri. </text>
<text sub="clublinks" start="76.88" dur="4.48"> Iye zvino tava kuenda kugaraji, ini ndatove ndapedza iwo akasimba. </text>
<text sub="clublinks" start="81.36" dur="1.66"> Kudzidziswa kwesimba chete kwakasara! </text>
<text sub="clublinks" start="83.02" dur="1.74"> Iwe unodana izvo kudziya? </text>
<text sub="clublinks" start="90.94" dur="3.02"> Nhasi ndiri kuita skate nguva </text>
<text sub="clublinks" start="94.56" dur="1.56"> Pamugwagwa. </text>
<text sub="clublinks" start="96.46" dur="3.36"> Ini ndakanga ndatanga kuronga kuenda ku "Ove berget" </text>
<text sub="clublinks" start="100.18" dur="3.88"> Asi hazvigone pasina kukwira. </text>
<text sub="clublinks" start="104.32" dur="5.5"> Uye Chitatu chanhasi, zvinoreva kuti Emily akasiya Umea pakutanga. </text>
<text sub="clublinks" start="109.82" dur="3.66"> Izvo zvinoita kuti zviome kunamatira kuchirongwa ichocho. </text>
<text sub="clublinks" start="113.62" dur="2.78"> Asi iyo track inofanira kuita zvakanaka chete. </text>
<text sub="clublinks" start="116.4" dur="2.04"> Saka ndichaita izvozvo nhasi. </text>
<text sub="clublinks" start="118.66" dur="4.22"> Ini ndichagara kwezuva rimwe chete ndisati ndananga kuUmeå. </text>
<text sub="clublinks" start="130.54" dur="4.2"> Heino howa, iyo iri kuoma zvakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="135.34" dur="1"> Zvakakwana </text>
<text sub="clublinks" start="137.24" dur="1.68"> Mamiriro ekunze akanaka futi! </text>
<text sub="clublinks" start="160.56" dur="3.44"> Ikoko tinoenda, tapedza nesangano iro. </text>
<text sub="clublinks" start="164.82" dur="3.28"> Ini ndainzwa kunge ndakaomarara nhasi, asi .. </text>
<text sub="clublinks" start="168.54" dur="2.82"> Yakanga isina kunyanyoipa. </text>
<text sub="clublinks" start="171.54" dur="4.02"> Izvi zvichaitika panguva ino yegore, kana muviri wako uri pasi pemutoro unorema. </text>
<text sub="clublinks" start="175.88" dur="2.5"> Chimiro chinosiyana. </text>
<text sub="clublinks" start="178.52" dur="5.72"> Chinhu chakakosha ndechekuti urambe wakanangisa pane iro basa riripo wobva waenderera mberi. </text>
<text sub="clublinks" start="185.28" dur="1.62"> Zvikuru! </text>
<text sub="clublinks" start="186.9" dur="4.14"> Gara uchikoshesa kuitwa pamwe nechikamu chakaomarara chenguva. </text>
<text sub="clublinks" start="191.06" dur="5.14"> Iye zvino ndiri kuenda kunodzikisira pasi kwechinguva uye gare gare masikati ini ndichave neyakareruka yekupora chikamu. </text>
<text sub="clublinks" start="196.2" dur="2.44"> Ini ndichaenda kunokwira bhasikoro. </text>
<text sub="clublinks" start="205.74" dur="1.5"> Tiri muUmea. </text>
<text sub="clublinks" start="207.38" dur="3.2"> Ini pamwe ndinofanira kukiya mota, ikozvino zvatiri muguta. </text>
<text sub="clublinks" start="210.82" dur="1.76"> China </text>
<text sub="clublinks" start="214.18" dur="3.36"> Ndiri kuronga kugara kweinopfuura vhiki </text>
<text sub="clublinks" start="218.1" dur="1.22"> Tarisa izvi kunze </text>
<text sub="clublinks" start="220.74" dur="1.46"> Taco nguva </text>
<text sub="clublinks" start="225.76" dur="1.9"> ndine nzara </text>
<text sub="clublinks" start="229.16" dur="2.72"> Hauna kumira munzira yako kuno? </text>
<text sub="clublinks" start="232.02" dur="1.56"> Hongu ndakadaro. </text>
<text sub="clublinks" start="234.16" dur="3.46"> Ini ndaive nembwa inopisa uye mamwe maice cream muStugun. </text>
<text sub="clublinks" start="238" dur="1.02"> MuStugun? </text>
<text sub="clublinks" start="239.26" dur="1.04"> Uye kofi zvakare. </text>
<text sub="clublinks" start="240.4" dur="0.7"> ndazviwona </text>
<text sub="clublinks" start="242.8" dur="1.48"> (inaudible) </text>
<text sub="clublinks" start="245.22" dur="2.48"> Zvirinani kuti taenda munzira kwayo </text>
<text sub="clublinks" start="247.86" dur="1.44"> Asi zvake hazvishande. </text>
<text sub="clublinks" start="249.54" dur="0.94"> kwete </text>
<text sub="clublinks" start="251.06" dur="0.8"> Damn. </text>
<text sub="clublinks" start="252.24" dur="1.64"> Iyi imhosva yako. </text>
<text sub="clublinks" start="254.02" dur="1.64"> Ngatitendeukei. </text>
<text sub="clublinks" start="255.66" dur="3.06"> Mira, batisisa paminiti, ndinofunga tinogona kuzviita. </text>
<text sub="clublinks" start="258.72" dur="3.26"> Ndinoziva nzira, iwe wakangondinyengedza kune imwe nzira </text>
<text sub="clublinks" start="261.98" dur="1.82"> Tarisa uone apa </text>
<text sub="clublinks" start="264.22" dur="3.46"> Takananga ikoko, Biltema muErsboda </text>
<text sub="clublinks" start="269.3" dur="2.02"> Ndeipi iri pamusoro apa. </text>
<text sub="clublinks" start="271.32" dur="2"> Uye tiri zasi kuno. </text>
<text sub="clublinks" start="278.3" dur="3.04"> Tinofanira kutora kodzero, sekufunga kwedu. </text>
<text sub="clublinks" start="281.34" dur="1.9"> Aya ndiwo marongero azvinoita ... </text>
<text sub="clublinks" start="283.78" dur="4.4"> Kana tikadzokera kumashure zvishoma ndokutora kuruboshwe kumusoro mumugwagwa padivi pedu, tinogona kumutevera iye. </text>
<text sub="clublinks" start="288.18" dur="3.14"> Hongu, asi isu tinogona kuita nzira pfupi kuburikidza neyadhi. </text>
<text sub="clublinks" start="291.32" dur="1.28"> Kuburikidza neruzhowa </text>
<text sub="clublinks" start="293.16" dur="1.72"> Takazviita here? </text>
<text sub="clublinks" start="294.88" dur="2"> Ehe, takazozviita. </text>
<text sub="clublinks" start="298.62" dur="1.54"> Mamiriro ekunze akanaka! </text>
<text sub="clublinks" start="300.3" dur="2.22"> Ini ndinongova nemubvunzo mumwe chete kwauri. </text>
<text sub="clublinks" start="302.62" dur="3.58"> Muti wepaini wakakwanisa sei kukura ipapo!? </text>
<text sub="clublinks" start="306.2" dur="1.98"> Nditsanangurire izvozvo. </text>
<text sub="clublinks" start="308.18" dur="4"> Kunze kwenzvimbo dzese dzekukura, uyu mudiki mupaini muti wakasarudza kugara ipapo, pamusoro pebwe guru. </text>
<text sub="clublinks" start="312.2" dur="1.76"> Hapana chimwe chinhu padombo iri </text>
<text sub="clublinks" start="313.96" dur="1.7"> Kune kumwe kukura kwemoss. </text>
<text sub="clublinks" start="315.66" dur="1.24"> Kwete </text>
<text sub="clublinks" start="317.28" dur="3.12"> Iyo pine yakangofanana newe, yakasindimara diki bastard. </text>
<text sub="clublinks" start="320.4" dur="2.46"> Ndingati hazvina basa </text>
<text sub="clublinks" start="322.86" dur="2.36"> Ehe, haisi iyo chaiyo nzvimbo yekugara </text>
<text sub="clublinks" start="325.42" dur="3.76"> Hameno kuti muti waifungei pawakasarudza kugara ikoko. </text>
<text sub="clublinks" start="329.18" dur="1.4"> Icho chinopenga! </text>
<text sub="clublinks" start="330.66" dur="1.64"> Inonakidza kwazvo </text>
<text sub="clublinks" start="345.48" dur="1.48"> Mangwanani akanaka! </text>
<text sub="clublinks" start="347.08" dur="3.82"> Ndiwo Mugovera uye yave nguva yemimwe nguva yekumhanya. </text>
<text sub="clublinks" start="351.28" dur="4.98"> Asi zvisati zvaitika ndichaedza kupindura mimwe mibvunzo yako. </text>
<text sub="clublinks" start="357.14" dur="4.04"> Ndakafunga kuve neQnA pane yangu Instagram Nyaya </text>
<text sub="clublinks" start="361.64" dur="4.16"> Saka ndakafunga kuti ndichapindura vamwe vavo mukati mevamwe vlog. </text>
<text sub="clublinks" start="366.78" dur="7.12"> Ndine mibvunzo yakawanda yakafanana, nezve izvo zvandinofarira basa uye ndezvipi zvenguva zvandinofarira. </text>
<text sub="clublinks" start="374.46" dur="4.84"> Ini ndaiti kumhanya ndiko kwandinofarira rudzi rwebasa kunze. </text>
<text sub="clublinks" start="379.3" dur="3.86"> Zvese kana zvasvika kure-kure-kure kudzidziswa uye zvikamu. </text>
<text sub="clublinks" start="383.16" dur="4.16"> Iyo chaiyo mhando yekumhanya haina basa zvakanyanya. </text>
<text sub="clublinks" start="387.32" dur="3.34"> Izvo chete zvine chekuita nenyaya yekuti chiitiko chinoshanduka. </text>
<text sub="clublinks" start="390.74" dur="2.78"> Kuona sezvese zvaunoda ibhutsu. </text>
<text sub="clublinks" start="393.52" dur="4.5"> Iwe unogona kumhanya chero kupi futi, kungave kuri musango, munzira kana pane asphalt. </text>
<text sub="clublinks" start="398.6" dur="2.78"> Izvo hazviite iwo mutsauko wakakura kudaro. </text>
<text sub="clublinks" start="401.52" dur="3.98"> Saka kupindura mubvunzo wako. Kumhanya ndiyo yakanakisa fomu yenguva mumaonero angu. </text>
<text sub="clublinks" start="405.5" dur="1.74"> Zvirinani muzhizha. </text>
<text sub="clublinks" start="407.24" dur="4"> Uye kumhanya zvakajairika ndiyo nzira yangu yekuda kurovedza muviri. </text>
<text sub="clublinks" start="411.24" dur="5.28"> Maitiro angu akakodzera ekurovedza muviri, angave akanaka kwenguva refu kumhanya mumakomo. </text>
<text sub="clublinks" start="418.76" dur="3.38"> Nguva yekuwana dzimwe nguva dzinoitwa panzira! </text>
<text sub="clublinks" start="482.56" dur="1.6"> Waita zvakanaka vakomana! </text>
<text sub="clublinks" start="484.7" dur="4.44"> Takatanga ne4x1000m pachikumbaridzo chinhanho. </text>
<text sub="clublinks" start="489.9" dur="3.56"> Mheto yekutanga yaive 3:17 </text>
<text sub="clublinks" start="495.1" dur="4.9"> Uye vamwe vatatu vaive vangangoita 3: 13-3: 14. </text>
<text sub="clublinks" start="500.02" dur="2.72"> Iine maminetsi maviri ekuzorora pakati. </text>
<text sub="clublinks" start="503.58" dur="2.66"> Mushure meizvozvo takaita 10x200m </text>
<text sub="clublinks" start="506.62" dur="3.34"> Nemasekondi makumi matatu ekuzorora </text>
<text sub="clublinks" start="510.86" dur="2.28"> Ivo vakatitora takatenderedza 32 masekondi. </text>
<text sub="clublinks" start="513.54" dur="2.76"> Uyezve 4x1000m zvakare. </text>
<text sub="clublinks" start="516.3" dur="3.16"> Nguva dzepamakumbo dzaive 3:10 ... </text>
<text sub="clublinks" start="520.2" dur="3"> 3:07, 3:06 na2: 58 </text>
<text sub="clublinks" start="523.56" dur="4.12"> Iwo ekupedzisira anogona kunge akapfuura muganho wekumhanya. </text>
<text sub="clublinks" start="528.12" dur="2.88"> Kwete iyo 2.58 imwe kana imwe chete. </text>
<text sub="clublinks" start="532.02" dur="1.06"> Zvakaoma </text>
<text sub="clublinks" start="534.26" dur="3.94"> Ndine mubvunzo wekuti mangani zvikamu zvenguva zvandinoita vhiki rega rega. </text>
<text sub="clublinks" start="538.56" dur="2.24"> Uye mhinduro ndeye 2-3. </text>
<text sub="clublinks" start="540.8" dur="2.76"> Kazhinji ndinozviita kakawanda mukudonha. </text>
<text sub="clublinks" start="543.56" dur="3.32"> Iko mamwe mavhiki anosvika anosvika mana epakati zvikamu. </text>
<text sub="clublinks" start="546.88" dur="1.78"> Asi kazhinji ndinoita 2-3. </text>
<text sub="clublinks" start="548.66" dur="4.24"> Vazhinji venyu maive muchishamisika kuti mangani maawa ekurovedza andinowana vhiki imwe neimwe. </text>
<text sub="clublinks" start="553.08" dur="2.16"> Izvo zvinosiyana zvakanyanya. </text>
<text sub="clublinks" start="555.7" dur="5.08"> Mamwe mavhiki, pandinenge ndiine akawanda akareba zvikamu </text>
<text sub="clublinks" start="561.1" dur="4.08"> Huwandu hwemaawa hunosvika pamakumi matatu. </text>
<text sub="clublinks" start="565.18" dur="3.92"> Ipo vhiki dzandinoita kwakawanda nguva uye kukwirira kushanda kunze ... </text>
<text sub="clublinks" start="569.1" dur="4.08"> Iwe haugone kurovedza muviri zvakanyanya, nekuti muviri wako wakanyanya kuneta. </text>
<text sub="clublinks" start="573.2" dur="3.68"> Mavhiki iwayo anongonditorera maawa gumi nemashanu kusvika makumi maviri ekukosha. </text>
<text sub="clublinks" start="576.94" dur="3.32"> Vhiki rakajairwa zvisinei, angave maawa makumi maviri neshanu. </text>
<text sub="clublinks" start="580.44" dur="5.38"> Asi zvinoenderana zvakanyanya nemhando yekurovedza muviri yaunoita vhiki iyoyo uye nehuremu hwesimba. </text>
<text sub="clublinks" start="585.82" dur="3.9"> Kumhanya kwakawanda kunodurura mamhasuru ako kupfuura kuita roller skiing. </text>
<text sub="clublinks" start="589.78" dur="4.68"> Iwe haugone kuita maawa mazhinji uchimhanya sezvaungaita pane roller skis. </text>
<text sub="clublinks" start="594.46" dur="4.38"> Ini handifunge kuti iwe unofanirwa kugadzirisa pahuwandu hwemaawa ekurovedza muviri. </text>
<text sub="clublinks" start="598.84" dur="2.94"> Pfungwa dzako dzinofanirwa kunge dziri pane izvo kurovedza muviri kwako kunosanganisira. </text>
<text sub="clublinks" start="601.96" dur="5.22"> Asi kana iwe uchiziva kuti urikuita yakakwira mwero weiyo intesity, haugone kuita makumi matatu emaawa masvondo. </text>
<text sub="clublinks" start="609.8" dur="3.18"> Ichi chikamu chakanditorera ipfupi ne 1.5h </text>
<text sub="clublinks" start="613.54" dur="4.38"> Izvo zviri pachena zvinoreva kuti yaive yakaoma. </text>
<text sub="clublinks" start="618.26" dur="5"> Uye iwe unofanirwa kuita zvakawanda zveizvi kuti uwane maawa makumi matatu anokosha. </text>
<text sub="clublinks" start="623.8" dur="4.84"> Mhinduro ndeyekuti inosiyana zvakanyanya, zvinoenderana nemhando ipi yechiitwa yauri kuita. </text>
<text sub="clublinks" start="629.06" dur="5.86"> Ndine mazuva matanhatu ekurovedzera vhiki imwe neimwe, uye kazhinji nguva dzose zvikamu zviviri pazuva. </text>
<text sub="clublinks" start="635.38" dur="2.72"> Izvo zvinondipa gumi nezviviri zvikamu pasvondo. </text>
<text sub="clublinks" start="638.1" dur="1.58"> Ndinogara ndine zuva rekuzorora. </text>
<text sub="clublinks" start="643.96" dur="1.5"> Aive masekondi makumi matatu. </text>
<text sub="clublinks" start="645.46" dur="1.76"> Uri kuitei? </text>
<text sub="clublinks" start="647.22" dur="2.06"> Ndiri kuita motor kudzidza. </text>
<text sub="clublinks" start="649.32" dur="1.1"> Unogona kuita izvi? </text>
<text sub="clublinks" start="650.68" dur="1.22"> Eheka. </text>
<text sub="clublinks" start="652.06" dur="0.84"> Batirira. </text>
<text sub="clublinks" start="656.22" dur="1"> Ikoko </text>
<text sub="clublinks" start="659.56" dur="2.92"> Ndine mubvunzo kwauri. </text>
<text sub="clublinks" start="662.72" dur="3.08"> Wakashandisa sei miriyoni? </text>
<text sub="clublinks" start="666.48" dur="4.68"> Iyi haisi mhinduro yawanga uchitsvaga, asi ini handina. </text>
<text sub="clublinks" start="671.16" dur="1.38"> Ndiri kuchengetedza. </text>
<text sub="clublinks" start="672.54" dur="3.28"> Muchatitengera kudya kwemanheru manheru? </text>
<text sub="clublinks" start="676.3" dur="1.74"> Chokwadi, ndinogona kuzviita. </text>
<text sub="clublinks" start="678.68" dur="2.82"> Ini chaizvo handina kushandisa yakawanda zvachose. </text>
<text sub="clublinks" start="681.72" dur="2.28"> Tiri munzira kuenda kunotora chikafu. </text>
<text sub="clublinks" start="685.14" dur="2.62"> Emily anondirambidza kutyaira. </text>
<text sub="clublinks" start="688.98" dur="1.9"> Iwe wakashata kwazvo pazviri. </text>
<text sub="clublinks" start="691.38" dur="3.44"> Zvirinani kuti anokwanisa ari muchigaro chevatyairi. </text>
<text sub="clublinks" start="695.06" dur="7.66"> Ini handibvumidzwe kutyaira nekuti ini ndakaiisa kwayakarerekera pamharadzano dzenzira nemumigwagwa yemotokari ndokusiya mota ichiita idling kwechinguva. </text>
<text sub="clublinks" start="703.02" dur="3.44"> Ipapo anonzwa kunyara kwazvo neni! </text>
<text sub="clublinks" start="706.54" dur="3.04"> Ndosaka ndisingabvumirwe ... </text>
<text sub="clublinks" start="710.52" dur="2.86"> Kwenguva yakareba sei isu takave coulpe? </text>
<text sub="clublinks" start="713.56" dur="1.54"> Anopfuura makore mana chete. </text>
<text sub="clublinks" start="715.86" dur="1"> Makore mana. </text>
<text sub="clublinks" start="717.14" dur="2.18"> Uye achiri kunyara nezvangu. </text>
<text sub="clublinks" start="719.32" dur="3.46"> Mubvunzo unotevera ndewokuti; Chii chandingaite dai ndanga ndisiri kuita izvi? </text>
<text sub="clublinks" start="723.1" dur="2.84"> Uye chii chandichaita kana yangu skiing basa rapera? </text>
<text sub="clublinks" start="726.72" dur="3.26"> Hazvina kubuda. Ndine zvakawanda zvinhu zvandiri kuda kuita. </text>
<text sub="clublinks" start="729.98" dur="3.14"> Ndiri kufarira kudzidza log-kuvaka. </text>
<text sub="clublinks" start="733.9" dur="4.14"> Chinhu chekuita nekuvaka. </text>
<text sub="clublinks" start="738.6" dur="5.86"> Asi ini zvakare ndine zano rekuti ini ndoda kudzidza zvemagetsi mainjiniya. </text>
<text sub="clublinks" start="744.46" dur="3.04"> Ndinozviona zvichinakidza. </text>
<text sub="clublinks" start="747.5" dur="2.4"> Ndine mazano mazhinji. </text>
<text sub="clublinks" start="750.28" dur="2.4"> Asi tichaona zvandinopedzisira ndaita. </text>
<text sub="clublinks" start="752.88" dur="1.1"> Zvinonzwika zvakanaka! </text>
<text sub="clublinks" start="754.2" dur="4.74"> Ehe ndinoda kuramba ndichiita imwe mhando yemitambo. </text>
<text sub="clublinks" start="760.84" dur="3.34"> Ini handidi kuzvirega zvizere. </text>
<text sub="clublinks" start="764.42" dur="1.72"> Heino kudya kwemanheru. </text>
<text sub="clublinks" start="771.6" dur="4.42"> Ini ndinofanira kunge ndakaraira zvekuwedzera. Asi chero chii, izvi zvichaita. </text>
<text sub="clublinks" start="776.18" dur="1.48"> Chikafu chakawanda. </text>
<text sub="clublinks" start="780.92" dur="1.96"> Izvi zvakaoma. </text>
<text sub="clublinks" start="783.56" dur="2.28"> Asi ndiri kutarisira. </text>
<text sub="clublinks" start="785.98" dur="5.74"> Tichachengeta QnA ichienda mumavhiki anotevera vlog. Saka kuti ndigone kupindura mimwe mibvunzo yako. </text>
<text sub="clublinks" start="791.72" dur="2"> Ndiri kupedza vlog pano. </text>
<text sub="clublinks" start="793.72" dur="3.54"> Kufanana uye kunyorera, kuti usarasikirwa nechikamu chinotevera. </text>
<text sub="clublinks" start="797.68" dur="5.88"> Tichava muSolleftea mukupera kweiyo. </text>
<text sub="clublinks" start="804" dur="2.54"> Takananga ikoko neChishanu ndinotenda </text>
<text sub="clublinks" start="808.06" dur="1.52"> Zvichava zvinofadza. </text>
<text sub="clublinks" start="809.58" dur="2.02"> Kutenda nekuona! </text>
<text sub="clublinks" start="811.6" dur="1.92"> Ndichakuona. Sara mushe! </text>